Indlela yokuHlela iifoto kwi-Instagram yoMxholo oLungileyo? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uhlela njani iifoto kwi-Instagram ngesiqulatho esifanelekileyo?
Oktobha 28, 2020 0 IiCententarios 561
Kulo lonke eli nqaku, siza kukubonisa Uhlela njani iifoto ze-Instagram, ngothotho lwezicelo kunye neengcebiso eziya kukunceda uphumelele kweli qonga ledijithali. Ke, okona kutya kwakho kuphambili (okanye iprofayile yakho) yeyona nto imnandi kubalandeli bakho.
Uhlela njani iifoto ze-Instagram?
Xa usakha iprofayile kwiakhawunti yethu ye-Instagram, nokuba kungenxa yokuba sifuna ukuba nefuthe, silawula iakhawunti yenkampani okanye singosomashishini beshishini elithile, kubalulekile ukuba umxholo wethu (iifoto kunye nevidiyo) zibe nomgca ofanayo i-harmonica, oko kukuthi, uhlelo olunye, isihluzi esinye kunye nokunye. Ngale ndlela, siyakwazi ukwenza ifuthe elihle kubalandeli bethu nakuluntu ngokubanzi.
Umbono kukugcina "ifomathi" efanayo ukuyibeka ngandlela thile; kuba oku, ngokubonakalayo, kuyenza ibonakale inocwangco, kuba zonke iifoto kunye nevidiyo zenziwe phantsi kweparameter efanayo.
Ukugcina oku kuya kuba nefuthe elihle kwaye sifezekisa ukuba upapasho lwethu lufumana ukuthandwa ngakumbi kwaye sinokufikelela kubantu abaninzi; ke, siya kwandisa inani labalandeli kwaye siya kwaziwa ngakumbi kwi-Instagram.
Konke oku kuyahambelana ngokuyinxalenye kwizicwangciso ezahlukeneyo zokuthengisa, ezisebenzayo ukuphumelela kwi-Instagram; Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngayo, sicebisa ukuba ufunde okungakumbi malunga nezi ndlela zintsha, eziluncedo olukhulu kuye nawuphi na usomashishini. Kweli thuba, siza kukuxelela Uhlela njani iifoto ze-instagram, ngokusebenzisa izicelo ezi-7.
Izicelo zokuhlela iifoto
Ezi zicelo siza kuzikhankanya apha ngezantsi, zinokukunceda kakhulu kulo msebenzi wokwenza ifomathi yakho yesondlo sakho esiphambili; nangona kunjalo, unokusebenzisa iziphumo ezifanayo, amacebo okucoca kunye nokuhlela, okuvumela ukuba usebenzise i-Instagram ngokungagqibekanga. Kwimeko apho ufuna ushicilelo lobuchwephesha, emva koko uza kufuna ezinye zezi zicelo zefowuni.
Ziya kufumaneka kuzo zombini i-Android kunye ne-iOS, ke akuyi kubakho ngxaki ekuzifumaneni kwaye nganye iya kuba neenkcukacha zayo.
1 # Ubusuku Pro
Esi sicelo sikhetheke ngokukodwa, kuba senzelwe ukufota iifoto ebusuku; qwalasela ikhamera yeselfowuni, ukuze iifoto zethu zibonakale zicacile kwaye zibukhali kangangoko, ngaphandle kweziphene ezifunyanwa xa uthatha ifoto ebusuku. I-Nightcap Pro, inokufumaneka kwiVenkile ye App, yezixhobo ze-iOS, kwaye ayifumaneki kwi-Android; eyona nto imbi kukuba ikwiNgesi, kwaye iyahlawulwa, kodwa kufanelekile ukunika imbuyekezo ngenxa yokusebenza kwayo kakuhle.
2 # Emva kwemini
Emva kwemini, iya kuba sesinye sezona zicelo zibalaseleyo ze hlela iifoto kwi-Instagram; Kuyacetyiswa kakhulu ngabasebenzisi kwaye kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Ilayibrari yayo yenziwe ngeendlela ezahlukeneyo zokucoca ulwelo, ukuze sizisebenzise kwiifoto zethu; Ukongeza, inani elikhulu lezakhelo kunye noburhabaxa, ukuze sikwazi ukuhlela iifoto zethu, ngokulula kwethu.
Singayifumana kuzo zombini izixhobo ze-Android kunye ne-iOS; Ngaphambili yayiyinkqubo ehlawulelweyo, kodwa namhlanje iye yasisixhobo simahla.
3 # Akukho sivuno
Isicelo sesithathu kuluhlu lwethu sichaze yonke into enento yokwenza nokuhlelwa kweefoto; Olu setyenziso luya kusivumela ukuba siphinde silinganise imifanekiso yethu, sinokufaka iifilitha ezilungileyo kakhulu kunye neziphambili kubo, njengokudala iikholaji ezahlukeneyo ngeendlela zokuyila. Singakwenza konke oku ngendlela elula kakhulu kwaye ekhawulezayo.
Njengasicelo sangaphambili kuluhlu lwethu, le app iyafumaneka kulo naluphi na uhlobo lwesixhobo esine-Android okanye i-iOS njengenkqubo yokusebenza; Ukongeza, isimahla kwiiVenkile zeNkqubo ezi khankanywe ngasentla.
Isicelo esilandelayo sigxile ekuhleleni iifoto ezikwifomathi emnyama namhlophe; Ukuba ungumthandi wolu hlobo lweefoto, emva koko esi sicelo asinakuphoswa kwi-smartphone yakho; Kuba le ndlela izakunika ukudityaniswa kobuhle kokutya kwakho okuphambili kwe-Instagram. Kusimahla, ngelishwa, kulwimi lwesiNgesi kwaye iyafumaneka nge-Android kunye ne-iOS.
5 # Uthwebile
Le app, njengale yesibini (Emveni kokukhanya), yenye yezona zisetyenziswa kakhulu kwaye iyacetyiswa ngabasebenzisi, ukufumana udumo ngeempawu zayo ezintle. Nge-Snapseed, nathi sinako hlela Iinestras Iifoto ze-Instagram, ngendlela elula nelula; kuba kwayesicelo esifanayo sivumela umsebenzi okhawulezileyo kwaye kamnandi.
Inezinto ezininzi zokufunda, eziza kusinceda ukuba sikhule ngcono ngaphakathi kwe-Snapseed uqobo. Isimahla, njengoninzi, kwaye iyafumaneka kuzo zombini izixhobo ze-Android kunye ne-iOS.
Ukuba uyifumene le posi inomdla, sikumema ngokufudumeleyo ukuba ufunde eli nqaku Uwapapasha njani amabali akho kwi-Instagram nokunye okuninzi Ngenisa ikhonkco elingasentla ukuze ufunde ukuba ungayenza njani le nkqubo ngeendlela ezininzi zokuyila kunye nokutsala abalandeli abanokubakho kwiprofayili yakho.
I-6 # VSCO Ikhamera
Mhlawumbi sele uvile ngale sicelo, ikwayenye yezona zaziwa kakhulu ngabahleli beefoto, kwiifowuni eziphathwayo. Ngokungafaniyo nokusetyenziswa kwangaphambili, i-VSCO Cam yenye yezona zinto zigqibeleleyo ezikhoyo, kuba yayijolise kuhlobo lobuchwephesha; uya kufumana ukhetho oluninzi kunye neendidi zokuhlela, ngenxa yoko ayenzi ukuba kube lula ukusebenzisa iapp.
Ngaphandle koku kungasentla, kuyacetyiswa kwaye ukuba ufuna ukubakho, sisixhobo esinamandla kakhulu hlela iifoto zakho kwi-Instagram, Le ayizukuyeka. Iyafumaneka kwi-iOS kunye ne-Android, kunye nokuba simahla.
7 # Ikhamera FV5
Ayisiyo isicelo sokuhlela iifoto ngolu hlobo, kodwa endaweni yoko usetyenziso oluya kunika ibhonasi kwikhamera yakho yeselfowuni; Oku kuyenzeka, kuba iKhamera ye-FV5, ungazandisa izixhobo kunye neenketho ezinekhamera yakho ngokungagqibekanga, eya kuyenza phantse ibe yikhamera enobuchule. Ke, xa ususa iifoto zakho emva koko unokuhlengahlengisa iiparameter eziyimfuneko kwikhamera yakho, ngoncedo lolu hlelo lubalaseleyo.
Kulwimi lwethu, iSpanish, simahla simahla kwaye siyafumaneka kwizixhobo ezine-Android kunye ne-iOS; ke kufanelekile ukuba ujonge kwaye uzame, nangakumbi, ukuba ikhamera yakho yeselfowuni ilunge kakhulu, ungayandisa imida yayo ngeapp.
Ngoku uyazi Uhlela njani iifoto kwi-instagram Ngeziapps zicetyiswayo, lixesha lokuba ujike iprofayile yakho ephambili ibe sisondlo sobuchule kwaye ubambe ingqalelo yabaphulaphuli bakho.
Ke kule vidiyo ilandelayo siza kukushiya, ungafunda okuninzi malunga nayo malunga nokuhlela iifoto zakho zesona sondlo siphambili se-Instagram yakho:
1 Uhlela njani iifoto ze-Instagram?
2 Izicelo zokuhlela iifoto
2.1 1 # Ubusuku Pro
2.2 2 # Emva kwemini
2.3 3 # Akukho sivuno
2.4 4 # Hypocamp
2.5 5 # Uthwebile
2.6 I-6 # VSCO Ikhamera
2.7 7 # Ikhamera FV5
Uyilayisha njani ividiyo kwi-Instagram ngamanyathelo nje ambalwa